သတင်းတွေဟာ Forex ထရိတ်ဒါတွေအတွက်တော့ အကျိုးအမြတ်များများရရှိနိုင်တဲ့အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်. သတင်းဆိုတာက စီးပွားရေး အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ပြောတာပါ. အဓိကစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက GDP ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပုံမှန်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်. ဒီသတင်းတွေထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်အတောအတွင်းမှာ သင်ဟာ Forex မှာ ကုန်သွယ်ရင်တော့ အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးရဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်.
သို့သော် တခုသတိပေးချင်တာက အကျိုးအမြတ်များများ ရချင်ရင်တော့ စွန့်စားမှုများများ လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါ. ထိုအချိန်မှာ အပြောင်းအလဲကြမ်းတာတွေ ပိုများနိုင်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကမောက်ကမတွေနဲ့ ရွေ့လျားနေတတ်ပါတယ်. သင်ဟာ တစ်ခုသော အခြေအနေအတွက် အစီအစဉ်ကောင်းကောင်း မရှိထားရင် ဒေတာထွက်တဲ့အချိန်တွေမှာ ရောင်း/၀ယ်- ထရိတ်- လုပ်ဖို့ လုံးဝမသင့်ပါဘူး.
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ သတင်းတွေ စီးပွားရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေ ကနေ ထရိတ်ဒင်းရဲ့ အခြေခံကို လေ့လာကြည့်မှာပါ. သင်အသုံးချနိုင်မဲ့ ဗျူဟာ များစွာရှိပါတယ်.
စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ
စီးပွားရေး ပုံပန်းသွင်ပြင်အားဖြင့် ဈေးကွက် က အနာဂတ်မှာလာမဲ့ ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်. အလွယ်ပြောရရင် စီးပွားရေး ကြီးထွားလာမှုဆိုတာ အနာဂတ် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ကိုဆိုလိုပါတယ်. ထိုကြွယ်ဝမှုကလည်း နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး တန်ဖိုး တောင့်တင်းခိုင်မာလာတာကို ပြနေပါတယ်. ထရိတ်ဒါတွ က စီးပွားရေး တိုးတတ်မှု (အပြုသဘောဆောင် စီးပွားရေး ထုတ်ပြန်ချက်) မှာရှိတဲ့ အတက်ပြတဲ့ဘက်ကို ရှာဖွေပါတယ်. အကြောင်းက သူတို့က အတက် trendမှာ ၀င်ရောက်ရောင်းဝယ်ပြီး အမြတ်ရယူရတာကို ပိုအားသန်ကြလို့ပါ. ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် လျော့လျဲမှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှု တွေကို ပြနေတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်တွေက နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ငွေကြေးတစ်ခုရဲ့  နောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကို တကယ့်ဒေတာအချက်အလက်တွေက ဈေးကွက်က မျော်မှန်းထားတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်သလား လွဲသွားသလား ပိုသွားလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခန့်မှန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်.
စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် ဟာသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. သူက ထရိတ်ဒါတွေကို အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေ အချိန်အခါတွေကို မလွတ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်. ဖွဲ့စည်းပုံက ရိုးရှင်းပါတယ်. စီးပွားရေးအချက်အလက်ပြဒေတာ Economic အင်ဒီကေတာတွေကို ဇယားထဲမှာ အချိန်ကာလ နဲ့အတူ ဖော်ပြထားပါတယ်. ထို အချက်အလက်ပြတဲ့ အင်ဒီကေတာတခုစီဘေးမှာ နောက်ထပ် အချက်အလက် data ကော်လံ သုံးခု- အရင်က ဖတ်ရှုမှုprevious reading ၊ ခန့်မှန်း forecast ၊ တကယ့် ဒေတာအမှန် ဖတ်ရှုမှု actual reading - ဆိုပြီး မြင်ရမှာပါ. သတင်းထုတ်ပြန်မှု မတိုင်ခင်မှာတော့ ပြက္ခဒိန်မှာ အရင်က ဖတ်ရှုမှု previous reading ၊ ခန့်မှန်း forecast ဆိုတာပဲပါမှာပါ. တကယ့် ဒေတာအမှန်ဖတ်ရှုမှု actual reading ကတော့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှပေါ်မှာပါ.
ခန့်မှန်းတဲ့တန်ဖိုးကို consensus လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတယ်. တနည်းပြောရရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေ၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက် မှုတွေရဲ့ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကိုယူတာ ကနေရလာတာဖြစ်ပါတယ်. ကျွမ်းကျင်သူတွေဆိုတာ ဈေးကွက်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာသူတွေ ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမတိုင်ခင်မှာ သူတို့ကို အများသဘောအရရွေးချယ်ထားသူတွေပါ. အကယ်၍ အမှန်တကယ်ထွက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက ခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုကောင်းနေရင် ငွေကြေးက တန်ဖိုးမြင့်တတ်လာမှာပါ. အမှန်တကယ်ထွက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက ခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုဆိုးရင်တော့ ငွေကြေးတန်ဖိုးကျမှာပါ. များသောအားဖြင့် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းတာထက် ပိုများတာကိုဆိုလိုပြီး ပိုဆိုးတာကတော့ ခန့်မှန်းတာထက် ပိုနည်းနေတာကိုဆိုလိုတာပါ. ဒါပေမဲ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့သော စဉ်းစားစရာလေးတွေရှိပါသေးတယ်. ဥပမာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း နဲ့ သူ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေပါ. ထိုနှုန်းနည်းလေလေ ငွေကြေးတန်ဖိုးတတ်လေလေပါ. တခုမှတ်စရာက ခန့်မှန်းတန်ဖိုး နဲ့ ကပ်နေတဲ့ တန်ဖိုးတခုကို လစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်. ခန့်မှန်းတန်ဖိုး နဲ့ အမှန်တကယ်ထွက်လာတဲ့ တန်ဖိုး ကွာလေလေ ဈေးကွက်မှာသက်ရောက်မှုကြီးလေလေပါ.
အရင်တန်ဖိုးတွေကို ပြထားတာတွေက ခန့်မှန်းတန်ဖိုးလောက် ဖတ်ရှုဖို့ အရေးမကြီးပါဘူး. တစ်ခါတလေ အရင်တန်ဖိုးတွေ ပြထားတာတွေကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တတ်ပါတယ်. ဒီပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို တကယ့်အမှန်တန်ဖိုး ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်. ဒီပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေက သိသိသာသာအရေးပါရင် ဈေးကွက်မှာလဲသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
ဈေးကွက်ကိုသက်ရောက်မှုကြီးနိုင်တဲ့ သတင်းကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပါ.
သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေကိုစောင့်စားပြီး သင့်အစီအစဉ်အရ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါ.
တခုမှတ်ဖို့က ဈေးကွက်က သတင်းကိုတုန့်ပြန်ရာမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် နာရီဝက် ကနေ နှစ်နာရီ ကြာပါတယ်.
သင်ရဲ့ FA နဲ့ TA ဆန်းစစ်မှု ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင် သတင်းကို ဈေးကွက်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုက သင်မှန်းထားတာနဲ့မကိုက်နိုင်ပါဘူး. ဈေးကွက်ကို မဆန့်ကျင် ကန့်လန့်မတိုက်ပါနှင့်. Trend ကိုမျက်ခြေမပြတ်လိုက်နေပါ (သင်ဟာ သင့်ဆန်းစစ်မှုထဲမှာ တချို့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကျန်နေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် သတင်းတွေနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို အဓိပ္ပာယ်လွဲ ကောက်နေတာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်).
အရမ်းမလောပဲ ခိုင်မာတဲ့အချက်ပြ signal တွေနဲ့ သူတို့တွေကို အတည်ပြုချက်တွေ ရသည်အထိစောင့်ပေးပါ.
အခု ကုန်သွယ်မှုသတင်းတွေကိုသုံးသပ်တဲ့ နည်းလမ်းသုံးခုကိုလေ့လာကြပါမယ်.
Slingshot လောက်လေးခွပစ်ချက် နည်း
သင်ဟာ ဈေးနှုန်းအတက်အကျ များတဲ့ ဈေးကွက်မှာ ကုန်သွယ်မှု လုပ်နေရင် သင့်ရဲ့ ၀ယ်/ရောင်း သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းကို ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ စတင်ပြောင်းလဲမှု trend မဖြစ်ခင် မှာသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်.
အရောင်း/အ၀ယ် position တခု မစခင် support နဲ့ resistance level တန်ဖိုးတွေကိုသတ်မှတ်ပါ. အဲ့ဒါတွေက သင့်ရဲ့ ဖြတ်ချမဲ့ တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်တွေပါ. အကယ်၍ ဈေးတွေဟာ သင်နဲ့ အဆင်မပြေတော့ရင် သင်ဟာ ဒီသတ်မှတ် level တွေမှာပဲ သင့်ရဲ့ အရောင်း/အ၀ယ် position ကို ပိတ်နိုင်ပါတယ်. ဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးသူတွေကတော့ stop loss အရှုံးခံနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်ကို သတင်းတွေထုတ်ပြန်မှုမလုပ်ခင်မှာ သတ်မှတ်ထားဖို့ပြောပါတယ်. ဈေးနှုန်းအတက်အကျ များတဲ့ ဈေးကွက်မှာ စွန့်စားမှုတွေလျှော့ဖို့ဆိုရင် တော့ အခုပြောမှာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်. H1 chart မှာ ဈေးနှုန်းက 10 pips လောက် support level အောက်ကျသွားတာတွေ့ရင် Buy stop ကို ထို level ရဲ့ အထက် 10 pips သတ်မှတ်လိုက်ပါ. ဒီနည်းနဲ့ အစပိုင်းအလှုပ်အခက်လေးပြီးတော့ ဈေးကွက် reversal ပြောင်းပြန်ဖြစ်မှု ကနေ သင်အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ပါတယ်.
Short position လဲထိုနည်းတူပါပဲ. H1 chart မှာ ဈေးနှုန်းက 10 pips လောက် resistance level အထက်ရောက် သွားတာတွေ့ရင် sell stop ကို ထို level ရဲ့ အောက် 10 pips သတ်မှတ်လိုက်ပါ.
ကုန်သွယ်သူတွေအကြိုက် ကုန်သွယ်မှုက ဖြစ်နေတာကြောင့် Slingshot လောက်လေးခွပစ်ချက် နည်းဟာ အမြတ်ရတဲ့ position တွေရဖို့ ခွဲပြီးရောင်းထုတ်ဖို့ရာ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်. ဈေးကိုသင်ကြိုက်ခဲ့ရင် ပြီးတော့ ထိုအရွေ့ကဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်းမသိရင် သင်ရဲ့ position ကို ခွဲပြီးရောင်းထုတ် နိုင်ပါတယ် (တစိတ်တပိုင်း ပိတ်ပြီး). ဈေးက ထိုလားရာအတိုင်းဘဲ သွားနေရင် ပိုမြင့်တဲ့ level တွေမှာလဲ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းအသုံးချနိုင်ပါတယ်.
မျှော်မှန်းချက် ပေါ် ကုန်သွယ်ခြင်း- ကောလဟာလကို ၀ယ်, တိကျတဲ့အချက်အလက်ကို ရောင်း
ဒီအတွေးအခေါ်ကတော့ တိုက်ရိုက်ပါပဲ - ဈေးကွက် ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတွေကို ငွေကြေးတခုခု နဲ့ ဆက်စပ်နားလည်ပြီး ထို စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကနေဖြစ်စေတဲ့ ဦးတည်မှုလားရာတွေမှ တဆင့် position တစ်ခုဖွင့်ပါ. ရေတို ရေရှည် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုတွေ ရှိပါတယ်. ကုန်သွယ်သူအများကတော့ အချိန်အတိုလေးအတွင်းမှာ ကုန်သွယ်ရတာကိုကြိုက်ကြပါတယ်. အကြောင်းကတော့ အတတ်အကျကြမ်းတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာဆို position တွေထိန်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ငွေမရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်.
ရေတို ဈေးကွက်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုတွေက စီးပွားရေးသတင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ. ဈေးကွက်မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေက consensus ခန့်မှန်းတန်ဖိုးထက်ကျော် ဖို့ အချက်အလက် data တွေကို မျှော်လင့်ကြလျှင် ဒါကိုသူတို့ စဉ်းစားကြတော့မှာပါ. ဥပမာ ဈေးကွက်မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေ သြစတေးလျှ ဘဏ် (RBA) ရဲ့ အတိုးနှုန်းမြှင့်လိုက်တာကို စောင့်တဲ့အခါကျရင် ဘဏ်မှာ အစည်းအဝေးမထိုင်ခင် သြဇီငွေလဲနှုန်းက တတ်လာမှာပါ. ဘဏ်ရဲ့ အစည်းအဝေး တကယ်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ ငွေလဲနှုန်းထား သိသိသာသာ တက်သွားတာကိုပြောချင်တာပါ. သြစတျေးလျဘဏ်က တကယ်လဲ အတိုးနှုန်းမြှင့်လိုက်တဲ့အခါ ဈေးကွက်မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သူတွေက AUD/USD အတွဲ pair ကိုရောင်းထုတ်ကျတဲ့အခါ ထိုအတွဲ pair က တကယ်တော့ ကျသွားပါတယ်. အတိုးနှုန်းမြှင့်ပြီးနောက်မှာ တက်မလာတော့ပါဘူး.
တစ်အချက်အနေနဲ့ ရှေ့လာမဲ့ပွဲတွေ စီးပွားရေးသတင်းတွေကို မြတ်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေပါ.
နှစ်အချက်အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စီးပွားရေးသတင်းတွေကို ခြေရာခံ ပြီး ဈေးကွက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်နေပါ.
သတင်းမျိုးစုံရဲ့ ဆက်စပ်ချက်တွေကို သိအောင်လုပ်ပါ. ဥပမာ လက်လီအရောင်းက GDP PPI CPI တွေကို ဘယ်လို လွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်တာမျိုး - ဆိုလိုတာက လက်လီအရောင်းက ဈေးကွက်မျှော်မှန်းတာထက် ရှေ့ရောက်နေရင် GDP နှုန်းမြင့် ကြောင်းထုတ်ပြန်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်လို့ရပါတယ်.
Trend လိုင်း တက်ခြင်း
ဒီနည်းကို သင်ဟာ အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကနေ ကြည့်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်မယ်ဆို အသုံးချနိုင်ပါတယ်. ဥပမာ NFP (Non-Farm Payroll) အမေရိကန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ သတင်းမျိုးပါ. ထိုအင်ဒီကေတာဟာ အရမ်းကို လူသိများ၊ အသုံးချနေတဲ့ စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ Indicator ညွှန်ပြကိရိယာပါ. ထိုသတင်းထဲမှာ US ရဲ့ တစ်လအတွင်း လယ်သမားတွေအလုပ်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကို ရေတွက်စာရင်းပြုစု ပေးထားပါတယ်. NFP သတင်းကို လစဉ် ရဲ့ ပထမ သောကြာနေ့တိုင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်.
ထိုသတင်းဟာ TA မှာသုံးတဲ့ chart တွေထဲမှာ လားရာတွေ မတည်ငြိမ်ဘဲ လှုပ်ခတ်မှုတွေကြီးစေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ကုန်သွယ်သူတွေကတော့ တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီး ထိုသတင်းရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ကောင်းကောင်းနားလည်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကုန်သွယ်မှု စလုပ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ သတင်းမထုတ်ပြန်ခင် ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက် -ထိုချိန်မှာရှိတဲ့ pair တခုရဲ့ trend အလှုပ်- နဲ့ သတင်းမထုတ်ခင် ၅မိနစ်အလို သင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေက order ၂မျိုး ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော Buy stop က 20 pips လက်ရှိဈေးအထက်မှာရှိနေပြီး Sell stop က 20 pips လက်ရှိဈေးအောက်ကျတာမျိုးတွေပါ.
Order ကို လက်ရှိဈေးရဲ့အထက် သို့မဟုတ် အောက် 40 pips သတ်မှတ် ဒါမှမဟုတ် ထိုနှုန်းမှာ ရှိနေရင် အမြတ်ယူလိုက်ပါ. သင့် Stop loss ကို လက်ရှိဈေးမှာ သတင်းမထုတ်ခင်၅မိနစ်အတွင်း ထားထားလို့ရပါတယ်. ဒါမှမဟုတ်ရင် လုံးဝမထားလိုက်လည်းရပါတယ်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရလာပြီဆို သင်ဟာ အရောင်းအဝယ်ကို အကျိုးအမြတ်ရှိရှိ ပိတ်လို့ရပါပြီ. တခြား order လဲပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့. သင်ကံကောင်းရင် သင် ထိုရောင်းဝယ်စွန့်စားမှု ၂ မျိုးစလုံးကနေ အကျိုးအမြတ်ရယူနိုင်ပါတယ်. ဈေးနှုန်းတွေက သူတို့ ဦးတည်ချက်တွေကို ပြောင်းလည်းပြီး ကျဆင်း တာတွေ ထောင်တတ်တာတွေ မတိုင်ခင် နိမ့်မြင့် တာတွေဖြစ်ရင်ပေါ့.
ရလဒ်က အနုတ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းက ဦးတည်ရာတဖက်ကိုရောက်သွားပြီး ပထမဆုံး order ကိုဖွင့်ပါမယ်. ဒါပေမဲ့ သင်အကျိုးအမြတ်ရမဲ့အခြေအနေတော့ မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး. အဲ့နောက် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဈေးနှုန်းက ရွေ့သွားပြီး နောက် order ကို ထပ်ဖွင့်ပါမယ်. ဒါပေမဲ့လဲ အကျိုးအမြတ်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းတော့ ထပ်ပြီး ဆုံးရှုံးသွားပါဦးမယ်. သင်ရပ်လိုက်ရင်တော့ အရှုံးသက်သာပါမယ်. သင်မရပ်ခဲ့ရင်တော့ သင့်အရှုံးကို ထေဖို့ order အသစ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် စွန့်စားမှုတော့ ပိုကြီးလာမှာပါ.
ဂျွန်လ ၈ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်
ထိုနေ့မှာ US NFP က 287K ကို ပေါင်းထည့်ခဲ့ပါတယ်. ခန့်မှန်းက 175K ပါ. သို့သော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက မှန်းထားတာထက်ကို တိုးခဲ့ပါတယ်- 4.7% မှ 4.9 % ထိ-ဒါကြောင့် EUR/USD မှာ အတက်ကြမ်းပြီး ဆန့်ကျင်ချင်တဲ့ တုံပြန်မှုတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ.